Winners အရှုံးသမားလိုပဲကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာ — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ငါသည်တချီကာဂို Bull ကဲ့သို့မိမိချန်ပီယံအကြောင်းကိုအခန်းကြီးမှရရှိခဲ့သောအချိန်အားဖြင့်, အဘယ်သူမျှမအံ့သြဖွယ်များရှိကြ၏. အဆိုပါစာရေးဆရာကရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုဖန်ဆင်းသောလမ်း၌သူ၏ဇာတ်လမ်းကပြောသည်: ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဦးဆုရှင်ဖြစ်မွေးဖွားခဲ့သည်. ထိုကျနော်တို့အဘို့သူ့ကိုသိသောအရာကိုင်: ခြောက်ခုချန်ပီယံကွင်းကိုအနိုင်ရ, ငါး MVPs, နှင့် 14 အားလုံးစတားပွဲ (အားကစားဖိနပ်ဂိမ်း၌သူ၏သွဇာအောကျနနျးစံဖော်ပြခြင်းမ).
သွဇာအောကျနနျးစံ၏ဤအမြိုးကိုကြှနျုပျတို့စဉ်းစားသောအခါများသောအားဖြင့်ပထမဦးဆုံးစိတ်ထဲကြွလာကားအဘယ်သို့ “ဆုရှင်ပါ။” သို့သော်လည်းငါသည်ကျွန်တော်တို့ကိုဆုရှင်၏အခြားကြင်နာများအတွက်အခန်းထားခဲ့ချင်. တစ်ချန်ပီယံအပေါင်းတို့ကိုလုပ်မပေးပါဘူးအဘယ်သူဆုရှင်များ၏ကြင်နာ. အဘယ်သူ၏အားနည်းချက်များကိုမိမိအအားသာချက်ထက်ပိုမှတ်သားဖွယ်များမှာဆုရှင်များ၏ကြင်နာ. တစ်ခါတစ်ရံပိုအရှုံးသမားတူသူအဆုရှင်များ၏ကြင်နာ.
ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူရိုးသားဖြစ်လိမ့်မယ်. နောက်ဆုံးနှစ်နှစ်နည်းလမ်းများစွာအတွက်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ရပြီ, ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းတော်တော်လေးခဲယဉ်းပါတယ်. ငါခိုင်ခံ့သောအိမ်ထောင်ပြုခြင်းနဲ့ငယ်နှစ်ဘဝအစအဦးခံစားဖူးတဲ့. ငါကျန်းမာအသင်းတော်၌ကြေး minsitry ၏ဝမ်းမြောက်ခံစားရပါဘူး. သို့သော်လည်းငါသည်လည်းအားနည်းခြင်းနှင့်အတူအနှောငျ့ခဲ့ကြရတယ်. အပြင်တစ်ခါတစ်ရံပြောပြရန်ငါဤမျှလောက်များစွာသောကောင်းသောအမှုအရာအကျင့်ကိုကျင့်ခံရဖို့ပုံရသည်ကြောင့်ခက်ခဲ. သို့သော်သာလြှငျသငျသညျအနညျးငယျပိုမိုနီးကပ်စွာမြင်နိုင်.
ငါနာတာရှည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ် syndrome ရောဂါရှိ. ငါသိတယ်, ငါဖြစ်စေရှေ့တော်၌ကြား၏တစ်ခါမျှ. ငါ့ကိုရိုက်ခတ်သောအခါပို sucker လာကြတယ်ကဲ့သို့စီစဉ်ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းထက်ခံစားခဲ့ရအဘယ်ကြောင့်ဒီတစ်ခါလည်းရဲ့. အစအဦး၌ကယ့်ကိုမသန်မစွမ်း me- ငါခြောက်နာရီတစ်နေ့အဘို့ကိုသာနိုးခဲ့, နှင့်အခြားဆယ်ရှစ်ယောက်အဘို့အကုန်. လာမည့်နှစ်တွင်ကျော်ကပိုကောင်းရခဲ့, ဒါပေမယ့်နေဆဲငါဖြစ်ဖို့အသုံးပြုအရာကိုတစ် shell ကို left. ငါသည်တ neverending ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နှင့်အတူပြီးခဲ့သည့်ခုနစ်နှစ်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်. ငါရိုးသားစွာငါ၏အဘက်ထရီသေဆုံးသွားတူငါ rested- ခံစားခဲ့ရနောက်ဆုံးသောကာလမအောက်မေ့နိုင်, ဒါပေမဲ့အားသွင်းဘယ်တော့မှ.
စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကအင်အားကြီးလောင်စာများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၏တိုင်းဒေသဖြစ်ပါသည်. ကျနော်တို့တိုင်း task အတွက်ကြောင့်လိုအပ်, တိုင်းစကားလက်ဆုံ, ခပ်သိမ်းသောစိတ်. ထိုလောင်စာအနိမ့်သောအခါ, အရာအားလုံးကြုံတွေ့နေကြရသည်. အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်, ငါ့ကိုယ်ငါ့အဆီထည့်မသွားပါစေလိမ့်မယ်. အဲဒီအစားအကြှနျုပျ၏အကြံပေးအဖွဲ့ညာဘက်အထက် lingers “E ကို,” ငါကတဆင့်လုပ်ရန်ကြိုးစား. ဒါဟာငါ့အသက်ကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှဧရိယာအားဖြင့် limping ငါ့ကိုကျန်ရစ်င်.
ငါသည်သင်တို့ကိုဤအမှုအလုံးစုံကိုပြောပြ, မသင့်ရဲ့ကိုယ်ချင်းစာများအတွက်, ဒါပေမဲ့သင်ထင်ပုံကိုစိန်ခေါ်ရန်. တချို့ကလွဲချော်သတ်မှတ်ရက်မှာကြည့်ရှုစေခြင်းငှါ, စိတ်ပျက်စရာနေ့ရက်များ, ငါ့အိမ်ထောင်မှာရံဖန်ရံခါတင်းမာမှု, နှင့်ထင်, “လူသား, ဒီကောင်လေးအခုအချိန်မှာဆုံးရှုံးသည်။” တဖန်ငါငါ့အသက်ကိုအစီအစဉ်များကိုပြောင်းလဲသို့မဟုတ်ငါ၏သားကိုပြောပြရန်ရှိသည်တဲ့အခါသေချာပါဆုံးရှုံးသွားတူခံစားရ, “ဖေဖေအခုကစားရန်လည်းပင်ပန်းပါတယ်။” ငါကစိတ်ဓာတ်မဟုတ်ခဲ့ဟုဆိုသည်လျှင်မုသာစကားကိုနှင့်ကြိုးစားနေမည်ဖြစ်ကြောင်း. သေး, ငါဆဲငါ့အချိုမြိန်အောင်ပွဲဆို.
အဘယ်သူမျှမ, ငါဆုရှင်၏လူစွမ်းကောင်းခိုင်မျိုးကိုမင့်; တကယ်တော့တော်တော်လေးအားနည်းနေတယ်. ငါဆုရှင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောကြင်နာတယ်. ထိုအခါငါသည်သင်တို့ကိုအများအပြားလည်းရှိပါသည်သံသယ.
ငါအောင်ပွဲများပြုပါ, ဒါပေမဲ့ငါ့အစွမ်းသတ္တိကြောင့်လုံခြုံသိရသည်ကွောငျ့မ. အကြှနျုပျ၏အောင်ပွဲအားနည်းချက်တွေကို၏ကြားမှဖြစ်ပျက်, တည်းဟူသောငါ၏အပြစ်များကို. ငါရန်သူများရှုံးနိမ့်နဲ့အနိုင်ရလုံခြုံသောအ Victor မဟုတ်ဘူး; ငါတကယ်မယ့်သူကလက်ခံရရှိ. ငါသညျယရှေုအတွက်အောင်ပွဲများ.
ကျမ်းစာလာသည်ကားအဖြစ်, "သင်၏ ထောက်. ကျွန်တော်တို့တနေ့လုံးသေဆုံးလျက်ရှိသည်; ကျနော်တို့ကိုသတ်ခံရဖို့သိုးကဲ့သို့မှတ်နေကြတယ်။ "ဘယ်သူမျှမက, ဤအရာအလုံးစုံအတွက်ကျွန်တော်တို့ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောသူကိုတဆင့်အောင်နိုင်ထက်ပိုပါတယ်” (ရောမ 8:36-37).
ပေါလုကဆာလံကိုးကား 44, ဆာလံဆရာရုံးတင်စစ်ဆေးအလယ်၌ဘုရားသခငျရဲ့အကူအညီနဲ့ဘို့အော်ဟစ်ဘယ်မှာ. ထိုအခါပေါလုသည်အဘယ်အရာကိုမျှဘုရားသခင်သည်ခရစ်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအဘို့ပြုတော်မူပြီအဘယျသို့ပြန်ပြင်နိုင်ပါသည်သူ၏အမှတ်အောင်ကြောင်းကျမ်းပိုဒ်ကိုအသုံးပြုသည်.
အများဆုံးဒီကဗျာအရာတစျခုမှာကြောက်မက်ဘွယ်သောအမှုအရာဖော်ပြပြီးနောက်ကြောင့်: သတ်ဖြတ်ခံရ, သတ်ခံရ, ပေါလုကပင်သူတို့ကိုအမှုအရာအတွက်ကျွန်တော်တို့အောင်နိုင်ကပြောပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးရှုံးလျှင်ပင်, ကျွန်တော်တို့အနိုင်ရနေ. ကြှနျုပျတို့သညျဤပြိုလဲကမ္ဘာကသိမ်းပိုက်ခံရနေလျှင်ပင်, ယရှေုအားဖြင့်အောင်နိုင်ရှိနေဆဲ. အဆိုပါသေးငယ်တဲ့နေ့စဉ်တိုက်ပွဲများကျွန်တော်တို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်ကြပါဘူး, စစ်ပွဲပြီးသားအနိုင်ရရှိခဲ့သောကြောင့်,. သင်တို့ကိုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်မျှော်လင့်ချက်မဆောင်ခဲ့ပါဘူး? ငါတို့သည်ခရစ်တော်ကိုအတွက်ဆိုလျှင်, ကျနော်တို့တကယ်မဆုံးရှုံးနိုင်.
ဖြစ်နိုင်စရာ, ငါကဲ့သို့သော, သငျသညျကွီးစှာသောအခက်အခဲတစ်ခုရာသီရောက်နေ. ငါဒီအမှန်တရားကစဉျးစားကွညျ့နည်းလမ်းအနည်းငယ်ဖြင့်သင်တို့ကိုအားပေးချင်.
ငါသည်ငါ့နှလုံး၌ငါ့အားနည်းခြင်းနှင့်အပြစ်တင်လျက်မြည်တမ်းအာရုံစိုက်ငါ့နေ့သုံးဖြုန်းလိုက်တဲ့အခါ, ငါသာအကြှနျုပျ၏စိတျဓာတျအစာကျွေးခြင်းနှင့်မဲ့ငါ့အမမှန်သောသဘောလောင်စာ. ငါစေ့စေ့သောအခါ, ငါဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးပြီထင်, ငါသညျယရှေုစေ့စေ့သောအခါငါအနိုင်ရကြောင်းသတိပေးတာပါ. သူသည်မိမိရန်သူများချေမှုန်းခဲ့သည့်အခါ, ငါတို့ကိုယ်စားသူတို့ကိုချေမှုန်းခဲ့သည်.
ငါသာယနေ့သို့မဟုတ်ဤအတိတ်နှစ်အနည်းငယ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့လျှင်, ငါသည်ဤကအမြဲဖွစျလိမျ့မညျကိုဘယ်လိုထင်ဖို့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံတာပါ. သို့သော်သခင်ယေရှုငါသေး expereienced ကြပြီမဟုတ်သောကားတိုင်ပေါ်တွင်အကြှနျုပျအဘို့မယုံနိုင်စရာအမှုအရာဝယ်ယူ. ယခုတွင်ငါသည် imperfectly ဘုရားသခင်ကိုသိ, ငါမူကားဿုံနောက်ပိုင်းမှာသူ့ကိုသိရ. သူကပင်ငါ့ကိုအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကကိုယ်ခန္ဓာပေးအပေါင်းတို့နှင့်ငါ၏အမျက်ရည်ကိုသုတ်ပါလိမ့်မယ်.
ငါတို့သည်လည်းယခုအနိုင်ရခံရဖို့ထင်ရတတ်သောသူတို့သည်အာရုံစိုက်ဖို့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစေနိုင်သည်. အမြဲကျွန်တော်တို့ကိုဒဏျခတျဟန်ကတူညီတဲ့စမ်းသပ်မှုတွေနဲ့ဆုတ်ယုတ်မှုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသူများသည်. သို့သော်တတိယသုံးလပတ်တွင်အနိုင်ရသည့်အသင်းကိုအမြဲအဆုံး၌အနိုင်ရရှိသူကိုအသင်းမက. လူအတော်များများဟာနေ့စဉ်တိုက်ပွဲများအနိုင်ရခံရဖို့ထင်ရ, ဒါပေမဲ့သူတို့စစ်အနိုင်ရသူတကိုးစားကြပြီမဟုတ်. အခုမကြည့်မရှု.
မိုက်ကယ်ဂျော်ဒန်ကျနော်တို့အစဉ်အဆက်ကိုမြင်ရပါတယ်အကြီးမြတ်ဆုံးနှင့်အများဆုံးလူကြိုက်များဆုရရှိသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်နေဆဲ. သို့သော်ရှိခဲ့ခံရဖို့ပိုမိုကြီးမားအနိုင်ပေးရှိပါတယ်. ထိုအခါကျွန်တော်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမကအစစ်ကိုယျ့ကိုယျကိုအနိုင်ရယူသောအရာကိုရှိပါတယ်; ခရစ်တော်ကသာလုပျဆောငျနိုငျ. သူကငါတို့အဘို့ငါတို့ရန်သူအပေါင်းတို့ကိုလုပ်ကြံမယ့်: မပါဘဲ, စာတနျသ, နှင့်သေခြင်းသူ့ဟာသူ. သူ၏ကိုအနိုင်ပေးမှအသင်းနှင့်အကျိုးအမြတ် join ဖို့ကြာအားလုံးသည်အပြစ်မှလှည့်နှင့်ကယ်တင်ရှင်အတွက်ယုံကြည်ကိုးစားသည်. မည်သူမဆို, ပင်ကိုအတို့တွင် သာ. ဆင်းရဲဆုရရှိသူရှိနိုင်ပါသည်.
ဤသူသည်ငါဤစကား wrote သောအခါအကြှနျုပျစိတျနှလုံး၌ပါသောအမှန်တရား “ချိုမြိန်အောင်ပွဲခံ”:
အဆိုပါ Victor သတ္တမဝင်ထွက်ခြင်းအနိုင်ရတဲ့ရဲ့တမဟုတ်
မီးခိုးရောင်မိုးကောင်းကင်ထွက်လည်းညှိုးနွမ်းသောအခါငါသည်ထိုနေ့၌ဆိုလို, သူ့ကိုငါနှင့်အတူစိုးစံအကြောင်းမရှိထိ​​ု့နောက်ငါ '' အနိုင်ရတာပါ
တစ်ဦးမိတ္တူတက်ကောက်ဖို့သေချာပါစေ “တက်” အခါထွက်ကြွလာ 10.27.14!
Liam • အောက်တိုဘာလ 23, 2014 တွင် 12:44 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခရီးငါအတိတ်စုံတွဲရက်ပေါင်းမရပ်မနားချိုမြိန်အောင်ပွဲကစားခဲ့ကြရတယ်, ဘုရားသခင့သင်၏အသက်တာ၌အလုပ်လုပ်နှင့်သင်၏အယ်လ်ဘမ်မှတဆင့်အလုပ်လုပ်ခံရဖို့သွားနေပါတယ်. သင်တို့အဘို့ဆုတောငျးလကျြ
အီမာဆန် Tillman II ကို • အောက်တိုဘာလ 23, 2014 တွင် 1:08 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဘုရားသခငျသညျသငျသညျ bro ကောင်းကြီးပေးတော်မူ.
ဗစ်တိုးရီးယားဂျုံးစ် • အောက်တိုဘာလ 23, 2014 တွင် 1:17 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောဖှယျစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်. သင်၏သီချင်းသည်အချိန်ကာလတစ်ခုအကြားရှုပ်ထွေးသောဆက်နွယ်မှုကိုဖော်ပြသည်, နှင့်မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ထောင်ချောက်များ. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. အရာအားလုံးသိပြီ, ကောင်းမကောင်း, အလင်း၏အဘထံမှဆင်းလာ၏.
အရာအားလုံး • အောက်တိုဘာလ 23, 2014 တွင် 1:48 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဖတ်ပါ! ငါဒါအားဖြင့်ဤမျှအားပေးတယ်ပေါ့! ငါသီချင်းနှင့်အတူစွဲလမ်းတယ်!
SteveL • အောက်တိုဘာလ 23, 2014 တွင် 3:43 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ကို, ဒီသီချင်းလေးဟာကျွန်တော့်ဘ ၀ အတွက်ကြီးမားတဲ့ကောင်းချီးတစ်ခုပါပဲ! ငါ့အဖေနဲ့အစ်မမှာသူတို့နှစ်ပေါင်းများစွာဆက်ဆံခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးပြhaveနာတွေရှိတယ်။ မင်းဒီသီချင်းကိုဘာကြောင့်ရေးခဲ့တာ၊ ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတာကိုမင်းရဲ့ဖော်ပြချက်ကလှပပြီးနှစ်သိမ့်မှုဖြစ်စေတယ်။. သင်၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ospel ၀ ံဂေလိတရားအပေါ်သစ္စာရှိခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်.
နေသန် • အောက်တိုဘာလ 23, 2014 တွင် 5:06 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အားနည်းနေချိန်မှာခင်ဗျားရဲ့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာနေတာကိုလည်းကျွန်ုပ်အံ့သြမိပါတယ်. စံပြစံပြတစ် ဦး.
လုဒိ • အောက်တိုဘာလ 23, 2014 တွင် 10:41 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒါကကျွန်မအတွက်အရမ်းအားရှိစေတယ်. ကျွန်ုပ်၏စွမ်းအင်သည်ပြီးခဲ့သည့် ၂ နှစ်တာကာလအတွင်းသင်၏စွမ်းအားနှင့်တူညီခဲ့သည်… နောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သော ၂ လကနာတာရှည်လိုင်မ်ရောဂါကိုခံစားခဲ့ရပြီးနောက်ဆုံး၌ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လာသည်! မင်းကိုကူညီမယ့်အရာတစ်ခုခုကိုမင်းနောက်ဆုံးမှာရှာတွေ့နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်! သင်ဤမျှလောက်များစွာသောလူများနားလည်သဘောပေါက်ထက်လုပ်နေလုပ်နေပါတယ်. သငျသညျမှိုကျ! သင်ငါ့ကိုရန်လှုံ့ဆော်မှုပါပဲ :)
ချိုင်းနား • အောက်တိုဘာလ 23, 2014 တွင် 11:52 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒင်းနစ် • အောက်တိုဘာလ 24, 2014 တွင် 1:41 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဘုရားသခင်ကမစ္စတာကိုကောင်းချီးပေးပါစေ. Barefield. သင်၏တရားဒေသနာကိုကြည့်ရှု။ ကောင်းချီးများစွာခံစားခဲ့ရသည်, သင့်ဂီတကိုနားထောင်ခြင်း, သင့်ရဲ့ဆောင်းပါးများနှင့်ပို့စ်များကိုဖတ်နေ. သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်တန်ခိုးကြီးသောယေရှု၏နာမ၌အနာပျောက်စေသောဆုတောင်းခြင်း. သငျသညျကိုထိရန်ဆက်လက်ခွန်အားနှင့်ခံနိုင်ရည်များအတွက်ငါဆုတောင်းပဌနာငြီးငွေ့စရာမလိုဘဲနေ့တိုင်းအသစ်ပြန်လည်ခံရဖို့မဟုတ်ဘဲသခင်ဘုရား၏အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။. မင်းအပေါ်မှာကောင်းချီးတွေငါဆုတောင်းတယ်, ဂျနီဖာနှင့်သင့်ကလေးငယ်နှစ်ယောက်. သင်းအုပ်ဆရာအဖြစ်သူ၏အသက်တာ၌ခေါ်တော်မူခြင်းကို ၀ ီလျံမ်ကနာခံခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါ၏သခင်, ခင်ပွန်း, ဖခင်. သင်၏ဘဝမှသူ၏အလင်းကိုဆက်လက်ထွန်းလင်းပါစေ. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဘ, ယေရှု၏နာမ၌, အာမင်.
duran Lowery • အောက်တိုဘာလ 24, 2014 တွင် 12:32 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူပေါ့. ဒီနေ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာဘေးထွက်ခြေရာခံရန်အလွန်လွယ်ကူသည်၊ အခြားလူများကသူတို့ဘ ၀ ကိုဘယ်လိုရှင်သန်မည်ကိုစိုးရိမ်သည်. ထထွက်လာရန်စောင့်ဆိုင်းမရနိုင်ပါ. ကလေးဘ ၀ အတွက်အကောင်းဆုံးဖခင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ငါတကယ်လှုံ့ဆော်ပေးတယ်.
ပက်ထရစ် • အောက်တိုဘာလ 24, 2014 တွင် 12:49 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ကို, မင်းနှလုံးသားကိုမျှဝေပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. သငျသညျဆငျးရဲဒုက်ခများနှင့်နေဆဲထိုကဲ့သို့သောအရည်အသွေးမြင့်အလုပ်ထုတ်လုပ်နိုင်ကြသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာပါပဲ. ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်၏ဘဝကိုစကားပြောရန်သင်၏တေးဂီတကိုအမှန်တကယ်အသုံးပြုခဲ့သည်. ထိုအခါငါဂီတထဲမှာသင်ကဲ့သို့ယောက်ျားတွေရှိပါတယ်အလွန်ကျေးဇူးတင်မိပါတယ် (အထူးသ hip-hop) အကြွင်းမဲ့အာဏာအမှန်တရားကိုမကြောက်သူစက်မှုလုပ်ငန်း. ငါ Rise သင့်ရဲ့နောက်ဆုံးအယ်လ်ဘမ်မဟုတ်မျှော်လင့်ပါတယ်, သို့သော်ထိုသို့ဖြစ်လျှင်, မင်းရဲ့အတိတ်ကငါ့ကိုသင်ကြားပေးခဲ့တာတွေအတွက်ငါအရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်4အယ်လ်ဘမ်များ.
Vince • အောက်တိုဘာလ 24, 2014 တွင် 1:00 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ချာနာ • အောက်တိုဘာလ 24, 2014 တွင် 1:16 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
မင်းရဲ့သီချင်းကိုငါတကယ်နှစ်သက်တယ် “ချိုမြိန်အောင်ပွဲခံ”, ဒါကြောင့်ထပ်ပေါ်ရှိနေမည် & ကျန်တဲ့စီဒီရဲ့ကြားနာမှုကိုငါမျှော်လင့်နေတယ်. ဘုရားသခင်သင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ & သင့်မိသားစု & ဆက်ပြီးအောင်မြင်မှုရမယ်!
ကတ် • အောက်တိုဘာလ 24, 2014 တွင် 1:26 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ ဒင်းဗားမြို့၌သင်ရှိနေစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကျွန်ုပ်မကြာသေးမီကတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်. အဲ့ဒီအချိန်အထိမင်းရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး. မင်းရဲ့သီချင်းကိုသီဆိုတုန်းကငါအရမ်းထိမိခဲ့တယ် “အောင်ပွဲခံ” ငါသည်လည်းလေးနှစ်အချိန်နီးကပ်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာအမျိုးမျိုးကိုရုန်းကန်ခဲ့ရသည်. ဒါကြောင့်, သင်တို့၏သီချင်းသည်ငါနှင့်အတူရှိ၏, မျက်ရည်များစီးကျလာသည်. သင့်ရောဂါအကြောင်းသင်၏အပိုင်းအစကိုသာဖတ်ရှုခြင်းဖြစ်သည်, မင်းငါ့ကိုငါခဏလောက်ခံစားခဲ့ရတဲ့ခံစားမှုမျိုးခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာငါတွေ့ပြီ: နာတာရှည်မောပန်းခြင်းရောဂါ. ဒါဟာကျွန်တော့်ရဲ့ကိုယ်ထိလက်ရောက်ရုန်းကန်မှုတွေကြောင့်ကျွန်တော့်ရဲ့မာနထောင်လွှားမှုနဲ့အလိုလိုကျလှတဲ့ဘဝအသက်တာကိုပြန်လည်ရှင်သန်စေပြီးခရစ်တော်အားအသစ်သောကတိကဝတ်ကိုပြန်ဆောင်ယူခဲ့သည်။; နောက်ဆုံးမှာ, ဒီအဖြစ်အပျက်ကကျွန်တော့်အတွက်ဖြစ်ခဲ့တာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ဒီရောဂါကူးစက်စေသည့်စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ တိကျသောစိတ်ကူးရှိသောအခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး နှင့်သာကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံခဲ့သည်. ငါဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သွန်းလောင်းနှင့်အတူမိုးပါပြီ, အခြားသူများ၏ဆုတောင်းချက်များ, ငါအတွေးအခေါ်ပညာရှင်အဖြစ်ဓမ်မအမှုသို့သွားရန်လေ့လာမှုများကိုဆက်လက်အဖြစ်ငါ့ကိုဘုရားသခငျ၏ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အတူဆက်လက်ကူညီပေးသည်သောငါ့ဇနီး၏တည်မြဲသောကတိကဝတ်. ကျွန်ုပ်တို့သည်လောက၏ဆင်းရဲဒုက္ခများကိုနက်နက်နဲနဲနားလည်ရုံတင်မကဘဲဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်သည်, ဒါပေမယ့်ကတဆင့်သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်. ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၏ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့်သင်၏ဘဝ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်.
ခရစ်ယာန် • အောက်တိုဘာလ 24, 2014 တွင် 1:51 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ကို! မင်းရဲ့ဂီတနဲ့တရားဒေသနာတွေကနေတစ်ဆင့်အားပေးမှုဖြစ်ခဲ့တယ်! ဘုရားသခင်သည်သင့်ကိုမည်သို့အသုံးပြုနေသည်ကိုချစ်ပါ! မင်းရဲ့မင်းငါ့ကိုငါ့ရင်ခွင်ထဲထည့်ထားပေးပါ ! ငါလည်းမင်းအတွက်ဆုတောင်းပေးမယ်! အိုးနှင့်ထိုသီချင်းကိုအပေါ်ကောင်းတဲ့ကြည့်ပါ!
မစ်ချစ် • အောက်တိုဘာလ 24, 2014 တွင် 2:31 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သင်၏မခိုင်မြဲသောယုံကြည်ခြင်းအတွက်ဘုရားသခင်သည်သင့်ကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူသည်သင့်အားအနာရောဂါကင်းစင်စေပြီးစစ်မှန်သော Shweet အောင်ပွဲတွင်သင့်ကိုကျန်းမာစေလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည်!!! ဘုရားသခင့်ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း…
Mackender • အောက်တိုဘာလ 24, 2014 တွင် 2:43 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒီဆောင်းပါးကကျွန်မကိုကောင်းချီးများစွာပေးခဲ့တယ်. ခရစ်တော်၌ကျွန်ုပ်၏အနာဂတ်အမွေအနှစ်ကိုဖတ်ရှုဆင်ခြင်သောအခါကျွန်ုပ်၏နှလုံးသည်ရွှင်လန်းပါသည်. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခရီးစဉ်. အယ်လ်ဘမ်ရရန်မစောင့်နိုင်ပါ. ငါသည်သင်တို့ကိုလူအားဖြင့်အစဉ်အမြဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရပါပြီ.
Erica D. Clanton • အောက်တိုဘာလ 24, 2014 တွင် 3:43 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဤသည်မှာကျွန်ုပ်ဖတ်ရန်လိုအပ်သည့်အရာဖြစ်ပြီး Sweet Victory သည်ကျွန်ုပ်၏နှလုံးကိုတကယ်ထိမိသည်. ဘုရားသခင်ပေးသောအရာကိုမျှဝေခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ရန် Trip ကျွန်ုပ်တို့ဘဝအတွက်သူ၏ရူပါရုံကိုမြင်နိုင်သည်!! မင်းအတွက်ဆုတောင်းပေးခြင်း!
.ရာဝတီ • အောက်တိုဘာလ 24, 2014 တွင် 4:05 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သင့်ရဲ့ဂီတလူကိုချစ်. ၎င်းသည်နှင့်အခြားခရစ်ယာန်ဟစ်ဟော့ပ်ဂီတသည်ကျွန်ုပ်၏ဘဝကိုဘုရားသခင်ပြောင်းလဲစေရာ၌ဆက်လက်တည်ရှိနေလိမ့်မည်. tripp သိသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုန်းကန်မှုသည်ထာဝရမဟုတ်ပါ. သတိပေးချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
GabeTaviano • အောက်တိုဘာလ 24, 2014 တွင် 5:50 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ခရီးစဉ်ကို. ကျွန်ုပ်တို့၏ fam သည်ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်နေ့တွင်ကမ္ဘောဒီးယားသို့ပြောင်းရွှေ့နေသည်. သင့်အတွက်သီးသန့်မေးခွန်းအနည်းငယ်ရှိသည်, ကျနော်တို့မထွက်ခွာမီမေးမြန်းဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်. ငါ့ကိုအီးမေးလ်တစ်စောင်ရိုက်လို့ရမလား (ငါဒီမှာမှတ်ချက်ပေးရန်အသုံးပြုအီးမေးလ်ရန်)? ငါ၏အ RISE ၏ကြိုတင်မှာယူမှုကိုမျှော်လင့်. တကယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်!!
ခရစ္စမတ် • အောက်တိုဘာလ 24, 2014 တွင် 11:05 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါအရမ်းကြည့်နေတယ်’ အယ်လ်ဘမ်ကို forward!! နှင့်အတူကပယ်စတင်ရန်အလွန်ကြီးစွာသောသီချင်းပါပဲ. ဘဝကိုပြောင်းလဲစေသောအခွက်တဆယ်နှင့်စစ်မှန်သောစာသား။. မဟုတ်တာမဟုတ်ပါဘူး’ ဒီထက်ပိုကောင်းတယ်! CFS သည်စုပ်ယူပြီးပျက်စီးစေသည်. ငါရတယ် 18 ဒါကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံးထွက်လာသောအခါကောလိပ်၌တည်၏. ဒါပေမယ့်သင်ကအဲဒါကိုကျော်လွှားနိုင်ပြီးသင်ကသင့်တော်သောအစားအသောက်များနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများဖြင့်သင့်ကိုကူညီလိမ့်မည်. ဒီတော့မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်! ဦး ဆုံးဆုတောင်းပါ, နာရီတိုင်းရေ. Detox ရေကိုကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်စေခဲ့သည်, အဖြူရောင်ဂျုံမှုန့်ဖြတ်, ခေါက်ဆွဲနှင့်အစာရှောင်ခြင်းအစာ. ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်လမ်းလျှောက်ကြသည်’ ပတ်ပတ်လည် dehydrated နှင့်ပိုပြီးအစားအစာနှင့်အတူကအစားထိုး. ဒါဟာသူ၌အကြှနျုပျတို့ကိုအများဆုံးအလုပ်လုပ်သောငါတို့၏စမ်းသပ်မှုတွေမှတဆင့်ပါပဲ. နေမကောင်းဖြစ်ခြင်း၏ထိုကာလ၌ (နေတုန်းပဲ) ဘုရားသခင်ကသူ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာရှိခဲ့တယ်… သင်နှင့်သင်၏အယ်လ်ဘမ်နှင့်သင်၏မိသားစု၊ & အများကြီးဆက်ပြီးအောင်မြင်မှု!
ယရှေုသညျ • အောက်တိုဘာလ 25, 2014 တွင် 6:00 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်မှု, ကမ္ဘာကြီးကိုငါတို့ကဲ့သို့မြင်ကြလိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့သို့ “အရှုံး” ဒီဘဝမှာ. အားလုံးအဖြစ်မှန်၌ရှိလျှင်ငါတို့ရှိသမျှသည်မွေးဖွားအရှုံးသမားဖြစ်ကြသည်, သူတို့အားအပါအဝင်, ကမ္ဘာကြီးကိုစဉ်းစားသော “အနိုင်ရသူ”..! အကယ်၍, သူတို့ကမှမလာကြဘူး “အသိပညာ” သို့မဟုတ် “သိ” အမှန်တရား, ဘာလဲ “ယရှေု”, သူတို့အရှုံးသမားဖြစ်နေဆဲ ..! ရင်တောင်မှ, ကမ္ဘာကြီးကို, သူတို့ကဆုရရှိသူဖြစ်ပုံရသည်။! မင်းကိုဝေမျှပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် “အားနည်းချက်”, ဘယ်အချိန်မှာအမှန်တကယ်၌တည်၏, နင့်ကိုငါချစ်တယ်!! ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ။ ၊, သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အားနည်းချက်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားသူအားသိစေခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်ပင်အလွန်ခိုင်မာသောသူဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြလိမ့်မည်…!! သင်၏ရုန်းကန်မှုများတွင်သခင်ကသူ၏ကျေးဇူးတော်ကိုသာပေးဆပ်နိုင်သည့်တိုင်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းနှင့်ငါ့ညီကိုရှေ့သို့ ဆက်၍ ဆက်သွားပါ။!! မင်းအတွက်ဆုတောင်းခြင်း ..!
အက်ရှလေ • အောက်တိုဘာလ 25, 2014 တွင် 9:16 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
မင်းဒီစစ်ပွဲကိုရင်ဆိုင်နေရပြီဆိုတာငါမသိခဲ့ဘူး. မင်းစာအုပ်ကိုဖတ်တယ်, “ကောင်းတဲ့ဘဝ” ခဏပြန်ပေမယ့်မြင်နေသတိရကြဘူး. ဒီနေ့မင်းရဲ့ဆောင်းပါးကမင်းကိုကောင်းချီးပေးခဲ့တယ်, သငျသညျအကြှနျုပျ၏ပဌနာအစ်ကိုအတွက်ပါပဲ. ကျွန်ုပ်၏ဝမ်းကွဲသည်နာတာရှည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုရောဂါခံစားနေရပြီးသူမသည်သူမလုပ်ကိုင်ခဲ့သောအရာများကိုပျော်မွေ့ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်. ခွဲဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်, ယနေ့ငါနှင့်သင်၏ခင်ပွန်းသည်၊. ကောင်းသောရန်ပွဲကိုတိုက်. သင်ကစစ်မှန်သောချန်ပီယံဖြစ်တယ်. ယေရှု၏မေတ္တာသည်အားလုံးကိုအောင်နိုင်သည်. P.s. dope သီချင်းကိုလည်း!
ရာခေလ • အောက်တိုဘာလ 25, 2014 တွင် 10:36 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါချိုသာအောင်ပွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ငါ YouTube ပေါ်မှာနားထောင်ပြီးအဲဒါကကျွန်တော့်ရဲ့မီးပွားကိုပြန်ပေးခဲ့တယ်. ငါစိတ်ဓာတ်ကျနှင့်ရုန်းကန်ခဲ့ကြရတယ်. ငါရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကဒီမှာမျှော်လင့်ချက်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်. အဲဒါကိုထားရန်မည်သို့အခြားစဉ်းစားလို့မရပါဘူး. မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့ခြင်းကကျွန်ုပ်အားဘုရားသခင်နှင့်ဝေးကွာသွားစေပြီးအဆိုးဆုံးအပိုင်းအစတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်. ငါသူ့ကိုအော်ဟစ်ခဲ့သည်, ကျွန်တော့်ကိုဒီစိတ်ပျက်အားလျော့မှုကနေလွတ်မြောက်အောင်ကူညီပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်. မင်းရဲ့ Sweet Victory သီချင်းစာသားဟာကျွန်မရဲ့ကျိုးပဲ့နေတဲ့အပိုင်းကိုတည့်မတ်ပေးပြီးကျွန်တော့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်. ဒီဆောင်းပါးကကျွန်မကိုလည်းအားပေးခဲ့တယ်. ဘုရားသခင်ကကောင်းတယ်. ငါ့ကိုဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာချစ်ကြပေမဲ့သူတို့ကိုဘယ်လိုကူညီရမယ်ဆိုတာမသိဘူး, သို့မဟုတ်ပင်ငါဘယ်လို thru သွားခဲ့ရာရှင်းပြဖို့. ဘုရားသခင်ကမင်းကိုသုံးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်, တက္ကဆက်ပြည်နယ်မှအားလုံးလမ်း. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ဂျူလီယာပွတ် • အောက်တိုဘာလ 25, 2014 တွင် 3:01 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒီအားတက်စရာသီချင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. မင်းရဲ့ album အသစ်ရဖို့မစောင့်နိုင်တော့ဘူး. ကျွန်တော်တို့ (ကျွန်တော့်မိဘများ) ရုံဟေတီကနေကောင်လေးတစ်ယောက်မွေးစားခဲ့သည်. သူ၌နှောက်ယှက်ရောဂါရှိသည်. ၎င်းသည်သူ၏မသန်စွမ်းမှုအားလုံးနှင့်အတူခက်ခဲသောလမ်းဖြစ်သည်, အရာအားလုံးအပေါ်သခင်ယေရှုကငါတို့အားအောင်ပွဲခံသည်ကိုငါသိ၏. ငါမင်းကို Salt Lake City မှာဖျော်ဖြေနေတယ်, စုံတွဲတစ်တွဲရက်သတ္တပတ် UT, ငါသည်လည်း၊. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
နှင့်သင်နှင့်မစ္စစ်မှဂုဏ်ပြုလွှာ. အသစ်ကလေးတစ်ခုအပေါ်. သူလား (ဒါမှမဟုတ်သူမ) မွေးဖွားသည်သို့မဟုတ်မ. :) ချစ်သူ!
သင့်ရဲ့ • အောက်တိုဘာလ 26, 2014 တွင် 8:15 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ကို, ငါမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းလူအများစုထံမှဝေးနိုင်သမျှဝေးဝေးဝေးနေပြီ…အသေးစားဗင်ကားမောင်းသူကော့ကေးဆပ်ငါးယောက်၏ကနေဒါ! သို့သော်ကျွန်ုပ်၏စပီကာများမှရှင်းလင်းမှုသည်အမြဲတမ်း Trip Lee ကိုပုံမှန်လည်ပတ်စေသည့်ရက်ပ်အချို့ဖြစ်သည်! Sweet Victory သီချင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏ကျန်းမာရေးရုန်းကန်မှုမှနုိုင်ငံရေးအရလမ်းခွဲခဲ့သည့်ဤအဖြစ်မှန်ကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်. နောက်ဆုံးအဘို့ 8 ငါ့သမီး၏အချိန်မတန်မီမွေးဖွားပြီးနောက်အလားတူအားနည်းချက်နှင့်အတူရုန်းကန်ငါနှစ်. ဒါဟာလမ်းလျှောက်ဖို့နှိမ့်ချတဲ့လမ်းဖြစ်ပြီးဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ဖို့သင်ယူနေတုန်းပဲ. သင်၏မျှော်လင့်ချက်ကိုမျှဝေပြီးလူငယ်များကိုလေးစားရန်နှင့်အတုယူရန်ဘုရားသခင်၏နာမတော်မမူသောလူသားပုံသက်သေကိုပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. သင့်အတွက်ကောင်းချီးများ, bro!
၏ • အောက်တိုဘာလ 30, 2014 တွင် 9:59 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
မနေ့ကအယ်လ်ဘမ်ကို download လုပ်။ ငါကချစ်ကြတယ်! ငါ့မျက်နှာသာ “အားလုံး Up ကိုထလော့”; ငါပြန်ကန်ပေါ်မှာရှိသည်… ဟားဟား… အံ့သြဖွယ်အယ်လ်ဘမ် Trip အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. တစ်နေ့မင်းကိုဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုမှာကြည့်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်.
Gabky • နိုဝင်ဘာလ 7, 2014 တွင် 8:12 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး. ဤသည်မှာကျွန်ုပ်သည်ဤ site ကိုပထမဆုံးအကြိမ်လာရောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်ယခုအထိကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုခဲ့သည့်စာမူအားလုံးကိုနှစ်သက်ပါ၏. ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ကောင်းချီးနှင့်အားပေးမှုရရှိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏အားနည်းချက်များရှိသော်လည်းသူသည်ကျွန်ုပ်ဘဝတွင်စိုးစံနေဆဲဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်သူမထံမျှော်ကြည့်နိုင်ပြီးအမြဲတမ်းမြှင့်တင်ခံရနိုင်ကြောင်းယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောအရာဖြစ်သည်။.
ငါသည်သင်တို့ကိုဤမှတဆင့်သွားခဲ့ကြသည်မသိခဲ့ပါ, မင်းရဲ့ဆုတောင်းချက်ထဲမှာပါ. မျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ဘုရားသခင်ကသင့်ကိုအများကြီးကောင်းချီးပေးပါစေ.
Sweet Victory ကိုနားထောင်ပြီးမင်းရဲ့သီချင်းကကောင်းချီးတွေခံစားရတယ်! ထိုအခါငါတပြင်လုံးကိုအယ်လ်ဘမ်နားထောင်ရန်မစောင့်နိုင်ပါ. ငါလာမယ့်ရက်သတ္တပတ်များနားထောင်ပါလိမ့်မယ်အားလုံးပါပဲသေချာပါတယ်. ကောင်းသောအလုပ်ကိုဆက်လုပ်ပါ!
လတ်ရှာ • နိုဝင်ဘာလ 8, 2014 တွင် 7:54 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒီဘလော့ဂ်ပို့စ်ကကျွန်တော့်အတွက်ကောင်းချီးတစ်ခုပဲ. ခဏခဏ, ငါမိသားစုအားဖြင့်နားလည်သဘောပေါက်ခံစားရဘူး, မိတ်ဆွေများ, သို့မဟုတ်ဤလမ်းလျှောက်အပေါ်အချို့ဘုရားကျောင်းမိသားစု, ဒါပေမယ့်ဒီ post ကအရာရာကိုရှုထောင့်ကနေကြည့်ပြီးဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးညည်းညူခြင်းကိုရပ်တန့်စေတယ်. ငါတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေထဲမှာကောင်းချီးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုငါသဘောပေါက်လာတယ်. ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားသူ၏တန်ခိုး၊, ငါတို့ရုန်းကန်မှုများကိုကျော်လွှားရန်ကူညီခြင်းဖြင့်, သူသွားနိုင်အောင်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသောအခါ. ပို့စ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မင်းရဲ့ Sweet Victory ဟာအံ့သြစရာပါ!
TTunique • နိုဝင်ဘာလ 17, 2014 တွင် 9:42 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါ့သမီးငါ့ကိုဒီသီချင်းကိုဆက်ကပ်အပ်နှံခဲ့သည်. ငါနားထောင်ခြင်းနှင့်ငိုရပ်တန့်နိုင်ဘူး. ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ခံအားစနစ်ပြsystemနာများအတွက်တိုက်လှန်နေရသည် 15 အနှစ်. နောက်ဆုံး3နှစ်ပေါင်းငရဲ၌ရှိကြ၏. သို့သော်ထိုအချိန်အတောအတွင်းသခင်ဘုရားသည်ကျွန်ုပ်၏နှလုံးသားကိုပြင်းထန်စွာဆက်ဆံခဲ့သည်. ငါနောက်ဆုံးတော့ရသူ့ကိုလက်နက်ချ. ယခုတွင်ငါသည်အဖြေများ left နှင့်ညာဘက်နှင့်ဖြည်းဖြည်းထွက်လာမယ့်နေပါတယ်. ငါလမ်းအပေါင်းတို့ထွက်ဘူး, ဒါပေမယ့်ငါကဲ့သို့ငါမောဘူး. ဒါဟာအံ့သြဖွယ်ပါပဲ!!! ဒီသီချင်း……ဒီသီချင်း! မျက်ရည်……
တိ • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 1:56 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
မင်းဆီကသီချင်းအသစ်တစ်ပုဒ်ကိုကြားရတာဒါမှမဟုတ်တင်ထားတဲ့တရားဒေသနာကိုတွေ့ရတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာငါအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်မှုခံစားရတယ်. သငျသညျဖှယျဖြစ်ကြသည်! CFS ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုငါတိုက်ရိုက်မသိသော်လည်းငါမြင်ပြီ. ကျွန်ုပ်၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှမိသားစုသူငယ်ချင်းမိခင်တစ် ဦး ၌၎င်းရှိသည်. ကျနော်တို့သူမ၏တွေ့မြင်သည့်အခါကြိမ်ကျနော်တို့ရှည်လျားသောလမ်းပိုင်းကိုမကျင့်သည့်အခါရှိပါတယ်. ဒါပေမယ့်သူမကိုတွေ့တော့သူမအမြဲတမ်းရွှင်လန်းပါတယ်. ငါဖတ်ပြီးတဲ့အခါသူမအားဖြင့်ငါမှုတ်သွင်းခံထားရတဲ့အချိန်တိုင်းသူမအားယေရှုကိုချီးမွမ်းကြောင်းသူမကပြောပြသည်။. အခြေအနေကိုစဉ်းစားရန်ငြင်းဆန်သောကြောင့်အောင်နိုင်သည်. သငျသညျနှစ်ခုအများဆုံးကျိန်းသေဆုရရှိသူဖြစ်ကြသည်! ငါတို့နှင့်သင်၏နှလုံးသားကိုဝေမျှနိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ် ၀ မ်းသာပါသည်. ဒါဟာငါ့အတွက်အများကြီးဆိုလိုတယ်.
Burton • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 8:54 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သငျသညျဤငါ့အားဆိုလိုတာကဘယ်လောက်သိကြပါဘူး. ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကမင်းနဲ့ဆန့်ကျင်နေသလိုပဲ, သငျသညျအဆုံး၌ပျံအရောင်များနှင့်အတူအနိုင်ရလိမ့်မည်ဟုသင်တို့သိကြ၏! ယခုမှာသင်သည်လွန်ခဲ့သောခုနစ်နှစ်ကတဆင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာကိုသိ, သငျသညျ Bro ငါ၏အဆုတောင်းပဌနာ၌ရှိသည်ကိုသိနိုင်ပါသည်. သင့်နှလုံးသားကိုဖွင့်ပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်.
Femi • မတ်လ 16, 2015 တွင် 5:58 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ကို, သငျသညျကြီးမားတဲ့လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ကြသည်. RISE ဟာအရမ်းကောင်းတဲ့အယ်လ်ဘမ်တစ်ခုပါ! သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်။ အဖြစ်, ကိုယ့်ရဲ့ထင်ရှားသောဘုန်းအသရေဘို့သင့်ကိုပြင်ဆင်နေညှဉ်းဆဲခြင်း၏ယာယီမီးလျှံပဲယုံကြည်တယ်. ဘုရားသခင်သည်သင်တို့ကိုပိုမိုအစ်ကိုသုံးရန်သတ်မှတ်ထားသည်. ဒါကြောင့်ပင်ပန်းမပေါက်ပါဘူး. ယုံကြည်ခြင်းကို ဆက်၍ ဆုတောင်းနေပါ. ငါမင်းကိုချစ်တယ်.
Nate • ဧပြီလ 26, 2015 တွင် 9:13 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
နာတာရှည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုသည်ကျွန်ုပ်ရှိစဉ်ကပင်ဘဝကိုဒုက္ခပေးခဲ့သည် 13 သို့မဟုတ် 14 လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်များကအထိနှစ်ပေါင်းများစွာအထိလမ်းလျှောက်ခဲ့ရသည် (ငါရယ် 28 ယခု). နှစ်ပေါင်းများစွာဆုတောင်းခြင်းနှင့်သုတေသနပြုလုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်မိသားစုနှင့်ကျွန်ုပ်၏အဖြေကိုရရှိစေသည်; အစားအသောက်အရင်းအမြစ်အကြောင်းရင်းဖြစ်ခဲ့သည်. အစေ့အားလုံးဖယ်ရှားခြင်း, နို့ထွက်ပစ္စည်း, ညနေခင်း, တာရှည်ခံတာတွေ၊ အစာစားတာဟာကျွန်တော့်ဘဝကနေလုံးဝပြန်လည်နာလန်ထူလာစေတယ်. ငါဘယ်တော့မှမပျော်ဘူး.
သင်၏ CFS အတွက်အလားတူအစားအသောက်အဖြေတစ်ခုရှိနိုင်လျှင်ငါမသိ, ဒါပေမယ့်ငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကိုသိစေချင်တယ်.
TheRealEstate • ဒီဇင်ဘာလ 7, 2015 တွင် 4:29 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဤစကားများကိုမျှဝေပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. ငါပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဒီဖတ်ပါလိမ့်မယ်အလိုရှိ၏, ဒါပေမယ့်ငါယခုတိုင်အောင်ဖတ်ရှုဖို့ရည်ရွယ်မခံခဲ့ရပါဘူး. ဒီအရာတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကိုအခုကျွန်တော်ပိုနားလည်လာပြီ. ကျေးဇူးထပ်တင်ပါရစေ, ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ.
-Thom L ကို.
Brandon Martinez • ဧပြီလ 23, 2016 တွင် 12:49 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဘုရားသခင်နှင့်အတူကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်ခြင်း၌လျှောက်လှမ်းရန်အတွက်သင်ကလှပသောစံနမူနာရှင်ဖြစ်သည်. ကျွန်ုပ်၏ဘဝနှင့်သက်ဆိုင်သောကျမ်းချက်များသည်နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ကောင်းချီးများဖြစ်လာသည်ကို Ive ကသူအားယုံကြည်ရန်သင်ယူခဲ့သည်. သငျသညျအကြှနျုပျကိုအမှန်တကယ်လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ တစ်နေ့တွင်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်ကိုတွေ့ဆုံရန်အခွင့်အလမ်းပေးပြီးသင်နှစ် ဦး စလုံးသည်ကျွန်ုပ်ကိုသေခြင်းထက်ဘဝကိုတွေ့မြင်နိုင်ရန်ကူညီပေးသည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။. နေ့စဉ်နေ့တိုင်း g ၀ ံဂေလိဟစ်ဟော့ကိုနားထောင်ပြီးကျွန်ုပ်ကိုနှိုးထတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်ငါကော်ဖီသောက်ရင်း blubuds ကိုနားစွင့်ပြီး ospel ၀ ံဂေလိဟစ်ဟော့ပ်ကိုဖွင့်ပြီးလေ့လာမှုကိုနားထောင်သည်။ ငါသိပ်နားမလည်ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါနက်ရှိုင်းတဲ့တွေးခေါ်ရှင်ကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ်. ကျွန်ုပ်၏ဆုတောင်းခြင်းနှင့်နှလုံးသားထဲရှိဆန္ဒတစ်ခုမှာဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအနည်းငယ်သာရှိသော်လည်းသင်ကိုယ်တိုင်နှင့်အတူထိုင်။ ခရစ်ယန်ယုံကြည်ချက်များအကြောင်းဆွေးနွေးပြီးတစ်ခုချင်းစီကိုဖြေဆိုရန်အလွန်ကောင်းမည်ဖြစ်သော်လည်းတစ်နေ့တွင်သင်နှင့်တစ်နည်းနည်းဖြင့်စကားပြောရန်ဖြစ်သည်။ အခြားသူများကိုမေးခွန်းများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ. ငါဖြစ်၏ 26 နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်၏နောက်ခံအတွေ့အကြုံကြမ်းတမ်းခြင်း၊ အတိတ်ရှိခြင်းနှင့်ခရစ်တော်သည်သူ၏ဘုန်းအသရေနှင့်ကောင်းကျိုးအတွက်ကျွန်ုပ်အားတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်သည်သူတစ်ပါးကိုစကားလုံးများဖြင့်မဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်၏လုပ်ရပ်များတွင်ပြသခြင်းအားဖြင့်အခြားသူများကို ဆက်သွယ်၍ လာအောင်နှိုးဆွပေးနိုင်သည် . ငါယုံကြည်သူပါ. ရောမ 1:16 ငါtheဝံဂေလိတရားကို unashamed ဖြစ်၏. သူငယ်ချင်းတွေတောင်မှငါ့ကိုကြည့်ပြီးဘုရားကကျွန်တော့်ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲစေခဲ့သလဲဆိုတာကိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်တဲ့အတွက်လူတွေဟာနေ့တိုင်းဘုရားသခင်အကြောင်းပြောကြတယ်. ငါဒီစာကိုမင်းဆီကနေဖတ်ပြီးဖတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်. သင်၏ပုံပြင်သည်ခိုင်မာပြီးခရစ်တော်သည်သင်၏စိတ်နှလုံးထဲတွင်အမြဲရှိသည်. တစ်နေ့မင်းမှာခဏရှိရင်ငါ့ကိုစာပို့ပါ. ဖုန်းဆက်ပါ. ငါ့ကိုဖေ့စ်ဘုတ်မှာရေးပါ. မင်းနဲ့စကားပြောဖို့ငါကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ. ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့ပုံပြင်ကမျက်ရည်တွေကျလာတယ်. ဘုရားသခင်သင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ,သင်၏မယားကို,သူငယ်များကို၎င်း၊.